b l u E s k yfO res T: ကောင်းစားရေး
( ကောင်းစားသူများ )
အရင်ခေတ်ကတော့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင် ဟိုဝါဒကို ကျင့်ရမယ်၊
ဒီဝါဒကို ကျင့်ရမယ်ဆိုပြီး ၀ါဒအပြိုင်အဆိုင်တွေရှိခဲ့တယ်။ ဘယ်စံနစ်က ငါ
တို့နဲ့ကိုက်တယ်။ ဘယ်စံနစ်က မကိုက်ဘူးဆိုပြီး စံနစ်ရွေးချယ်မှုတွေလည်း
ရှိခဲ့တယ်။ စံနစ်တွေ၊ ၀ါဒတွေဘယ်လိုပဲကောင်းကောင်း သေသေချာချာ
အကောင်အထည်မဖေါ်ရင် အလကားပဲဆိုတာ မြန်မာပြည်သူတွေ သဘော
တော်လှန်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်။ နိုင်ငံရေးပဲဖြစ်ဖြစ် တကယ်တော့ တိုင်းပြည်ကောင်း
စားရေးကို လုပ်ရတာ။ ပြည်သူတွေကောင်းစားအောင် ကြိုးပမ်းရတာ။ ဒါပေမဲ့
လုပ်ပုံလုပ်နည်း လွဲမှား။ မမှန်ကန်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်။ မလုပ်တတ်ပဲ လုပ်။
မလုပ်နိုင်ပဲ လုပ်။ မညီမညွတ်နဲ့လုပ်။ စတာတွေကြောင့် တိုင်းပြည်က မကောင်း
မြန်မာ့သမိုင်းတလျှောက်လုံး ဒီလိုအလွဲအမှားတွေနဲ့ ခရီးဆက်လာတာ။ တိုင်း
ပြည် စုတ်ပြတ်သပ်တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ကြီးမားတဲ့ သဘာဝ
ဘေးအန္တရယ်တွေနဲ့လည်းကြုံရတော့ ချွတ်ခြုံကျတဲ့နိုင်ငံအဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ရ
တယ်။ တိုင်းပြည်က ချွတ်ခြုံကျပြီး မကောင်းစားပဲ သူတောင်းစားနိုင်ငံအဖြစ်
ရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့ ပွဲလန့်တုန်းဖျာခင်းတဲ့လူတွေကတော့ ကောင်းစား
ကုန်ကြတယ်။ သူဌေးသူကြွယ်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ အုပ်ချုပ်သူအတော်များ
စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေမှာလည်း ဒီလိုအလွဲအမှားတွေလုပ်တဲ့
သူတွေရှိတယ်။ စစ်အုပ်စုလောက် အရေအတွက်မများပေမဲ့ ဒီမိုကရေစီဘက်
တော်သားဆိုသူအချို့ကောင်းစားကုန်တယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးဆိုတဲ့ ဦး
တည်ချက် အစကတည်းက မရှိလို့လား။ ရှိရဲ့နဲ့ ပျောက်သွားတာလား။ မေ့သွား
တာလား။ ဖျောက်လိုက်တာလား။ မေ့လိုက်တာလားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေ
အသိဆုံးဖြစ်မယ်။ အများပြည်သူ မကောင်းစားရင် မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေး မဟုတ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အုပ်စုကို ဆန့်ကျင်တဲ့အင်အားစုတွေအားလုံး အရေးနိမ့်ကြ
တယ်။ စစ်အုပ်စုပဲ အမြဲအသာစီးရတဲ့တိုင်းပြည် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဟာ စစ်အုပ်စု ဆန့်ကျင်ရေးသမားတွေအတွက် ခါးသီးတဲ့ အမှန်တရား။ စစ်အုပ်စုအတွက်တော့
ချိုမြိန်တဲ့ အမှန်တရားပေါ့။ ဒီမိုကရေစီကို တောင်းယူလို့မရ ၊ တိုက်ယူမှ ရမယ်လို့
အခုလည်း ဒီမိုကရေစီအပြောင်းအလဲဆိုတာကို စစ်အုပ်စုကပဲ ဦးစီးထိမ်းချုပ်ပြီး အကောင်းအထည်ဖေါ်နေတယ်။ တိုင်းပြည်ကောင်းစားအောင် ဘယ်တုန်းကမှ
မလုပ်ခဲ့တဲ့ စစ်အုပ်စု။ ဒီမိုကရေစီရေး တောင်းဆိုသူမှန်သမျှကို ရက်ရက်စက်စက်
နှိပ်ကွပ်ခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုက သူတို့စိတ်ကြိုက် ဒီမိုကရေစီကို တည်ဆောက်ဖို့လုပ်နေ
ဒီတခါမှာတော့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ အများစုက စစ်အုပ်စုခေါ်ရာနောက်ကို အသာတကြည်လိုက်ပါနေကြတယ်။ တော်တော်များများကလည်း အကောင်းမြင်
တယ်။ နိုင်ငံတကာကလည်း ဘေးတီးပေးတယ်။ စစ်အုပ်စုအစိုးရကို မြှောက်ပေး
တယ်။ သူတို့ကိုဆန့်ကျင်နေရင် တိုင်းပြည်ပိုနစ်နာတာပဲ ရှိမယ်လို့ သဘောပေါက်
သူက ပေါက်တယ်။ ဒီမိုကရေစီသမားတွေလည်း အစွမ်းကုန်သလောက်ရှိပြီ။ ခြေ
ကုန်လက်ပမ်းကျပြီ။ အလားအလာ မကောင်းဘူး။ စစ်အုပ်စုက မောင်မောင်ခေါ်တုန်း
ဗျာ ထူးထားမှတော်ခါကျမယ်လို့တွက်တဲ့သူက တွက်တယ်။ ဒီတကြိမ်မှာ ဘယ်သူ
( သူတောင်းစားတွေ ကောင်းစားရေး )
မြန်မာပြည်ကအခြေအနေတွေကို တချို့ကတော့ မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်နေတယ်လို့
မြင်တယ်။ ခွေးမြီးကောက်ကို ကျည်တောက်စွပ်နေတယ်လို့ မြင်တယ်။ တချို့က
တော့ ပြည်သူတွေကောင်းစားအောင် ဒီတကြိမ် တကယ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မြင်
တယ်။ တချို့ကတော့ ဟုတ်မလိုလိုနဲ့ အီလည်လည်ဖြစ်ကြလိမ့်ဦးမယ်လို့တွက်
တယ်။ တချို့ကလည်း လမ်းခုလတ်မှာ စစ်အာဏာသိမ်းလိမ့်ဦးမယ်လို့ခန့်မှန်း
တယ်။ တချို့ကလည်း ဒေါ်စုအစွမ်းကြောင့် စစ်အုပ်စုဟာ ကျားကနေ ကြောင်ဖြစ်
လာမယ်လို့ ထင်တယ်။ တချို့ကလည်း ကျားကနေ ကြောင်ဖြစ်သွားတာ ဒေါ်စု
လို့ပြောကြတယ်။ တချို့ကတော့ မြန်မာပြည်ကို အမေရိကန်လက်ထဲ ထိုးအပ်
လိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲလို့ ယူဆတယ်။ (အခုလည်း ဒီအခြေအနေ ရောက်
တိုင်းပြည်တခု ကောင်းစားအောင်လုပ်ဖို့က လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူ
တိုင်းသဘောပေါက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းလွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ပြည်သူ
တွေ ကောင်းစားတဲ့ခေတ် တခါမှရောက်မလာပဲ သူတောင်းစားသာသာဖြစ်နေ
တာကတော့ လွန်လွန်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ ညံ့လွန်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။ တိုင်းပြည်
ကောင်းစားရေးကိစ္စက စစ်အုပ်စုတင်မကပဲ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးနဲ့ စစ်အုပ်စု
အရင်က ကိုယ်နဲ့ မတိမ်းမယိမ်းနိုင်ငံတွေ။ ကိုယ့်လောက်မှ အခြေအနေမဟန်တဲ့
နိုင်ငံတွေ ကိုယ့်ကိုကျော်တက်ကုန်တာ ကြာပြီ။ ဘယ်တော့မှ မြန်မာပြည်သူတွေ
ကောင်းစားတဲ့ခေတ် ရောက်မှာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် သေချာရေရာတဲ့အဖြေ
က အခုထိ မရှိသေးဘူး။ လောလောဆယ်မှာတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေါင်းစဉ်
အောက်မှာ လူတစုမက ကောင်းစားနေကြပြီ။
( ပန်းချီ ၊ ပီကာဆို )
Posted by blueskyforest at 3:33 PM
တစ်ချို.ဘလော့တွေမှာ ဆဲဆိုသံတွေညံနေတဲ့ အချိန်မှာ ခင်ဗျားဘလော့က ကွန်.မန်.ဘောက်စ်မှာ တရားရိပ်သာလေးလို ဖြစ်နေတာတော့ကောင်းတယ်
စစ်တပ်အခန်းကဏ္ဍကတော့ရှိနေရမှာပါ၊ တစ်ပြည်လုံးဆင်းရဲတဲ့အချိန်မှာ စစ်တပ်ကအောက်ခြေအဆင့်တွေလဲပါပါတယ်၊ တကယ်ကောင်းစားသွားတာ အထက်ပိုင်းပဲမဟုတ်လား၊ စစ်တပ်က သူတို.ရဲ့ အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးနဲ.ကာကွယ်ရေးလောက်ပဲယူသင့်တယ်၊ အရင်ကသတင်းစာတွေထဲမှာ စစ်တပ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဆေးရုံတွေကို သွားရောက်စစ်ဆေးပြီး ဆရာဝန်တွေကိုလည်း ညွှန်ကြားလိုက်တာပဲ၊ ထို.အတူ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်က ဆရာတွေ၊ တံတားဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေကိုလည်း ညွှန်ကြားလိုက်တာပဲ၊ အဲဒါမျိူးတွေလုံးဝမရှိသင့်တော့ဖူး၊
အရင်က တရုတ်ကြီးကို လုပ်ချင်ရာလုပ်ဆိုပြီး တစ်တိုင်းပြည်လုံး အပ်ထားပြီး ခုမှ မရှူနိုင် မကဲနိုင်နဲ. အမေရိကန်ကိုပြေးကပ်နေတဲ့ပုံပဲ၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမေရိကန် နဲ. အီးယူနိုင်ငံတွေရဲ့ အထောက်အပံ့နဲ. ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုးတက်မူ.ကမြန်နိုင်တယ်၊
နောင်တစ်ချိန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက တရုတ်နဲ.အမေရိကန် တို.ရဲ့ စစ်တလင်းပြင် မဖြစ်ဖို.ကတော့ အရေးကြီးတယ်၊
ဒါပေမဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲ မူ.တွေအတွက် လက်ရှိ အစိုးရရော၊ ပြည်သူတွေရဲ့ mindset ကို တော်တော်ပြင်ယူရဦးမယ်၊
ပြည်သူတွေကောင်းစားအောင်ဒီတကြိမ်တကယ်လုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့မြင်တဲ့သူတွေကိုတော့အတော်အံ့သြမိတယ်၊ဒီ ၂ နှစ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူအများစုရဲ့အခြေအနေကိုမမြင်လို့မသိလို့ပဲလားမသိဘူး။ကောင်းတယ်လို့ထင်ရတာတွေကလည်းသူတို့အုပ်စုနေသာအောင်ရွှေ့ရုံလေးရွှေပေးတာလို့ပဲမြင်တယ်။